Shan qof oo lagu dilay Shabeellaha Hoose & xiisad ka taagan - Awdinle Online
Shan qof oo lagu dilay Shabeellaha Hoose & xiisad ka taagan
Wararka laga helayo degaanka Yaaqbariweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in duleedka degaankaas lagu dilay Shan qof oo Shacab ahaa.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa la sheegay inay hal goob ku dileen dadka Shacabka ah xilli ay ku sugnaayeen Tuulada Yaaqroobley oo u dhow degaanka Yaaqbariweyne oo hoostaga degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay ku warameen in dilkaan uu salka ku haayo aanooyin qabiil oo horay uga jiray degaankaas, isla markaana maleeshiyaadkii dilka geystay ay goobta isaga baxsadeen.
Wararka laga helayo degaanka Yaaqbariweyne ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Maanta halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeeysa laba maleeshiyo Beeleed, taas oo salka ku heysa dadka la dilay.
Degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa horay uga dhaceen dagaal beeleed ku bilaawday dilal qorsheysan balse markii dambe isku bedelay in dad nool inta la dilo hadane la gubo, waxaana kala dhex-galay Dowladda Soomaaliya & Maamulka koonfur Galbeed oo Ciidamo geeyay.
Previous articleGuddiga Doorashooyinka lagu mursan yahay oo wada qorshe lagu soo saarayo Jadwal Doorasho
Next articleJubbaland oo shuruud ku xirtay doorasho lagu qabto degaannada Maamulkaas